Global Voices teny Malagasy » Hong Kong: Hetsika Tselatra Fanoherana Marika Lafovidy Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Janoary 2012 22:45 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Eoropa Andrefana, Hong Kong (Shina), Italia, Shina, Fanoherana, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Olona an'arivony no nanao fihetsiketseham-panoherana teo an-tokotany manoloana ny tsenam-barotra Dolce & Gabbana's  ao amin'ny lalan'i Canton, toerana ivangongoan'ny mpizahantany ao Hong Kong indrindra, omaly (8 Janoary 2012).
Mivory ny olona, mikorotandrotana noho ny nataon'ny mpiambina ilay tsenambarotra Italiana malaza vao nandrara mpaka sary monina ao izay monina ao Hong Kong tsy hahazo hipika sary eo amin'ny lalana fandehanan'ny mpandeha an-tongotra eo anoloan'ny tranombarotra, milaza fa ny mpizahantany Shinoa avy any amin'ny Tanibe ihany no afa-manao izany .
Nanazava tamin'ny gazety tao an-toerana taty aoriana ilay tsenambarotra malaza fa ny toromarika dia ny hanakanana ny olona tsy hanitsakitsaka ny zo sy fizaka-manan'ny orinasa miranty ao anatin'ny varavaram-pampirantiana. Na izany aza tsy nohazavain'ny tsenambarotra ny fisian'ny politika roa misaraka apetraka ho an'ny mpizahantany avy any amin'ny Tanibe ao Shina sy ny ho an'ny mponina ao an-toerana.
Niely faingana tamin'ny Facebook ny domberina maherihery teo am-pandrenesana ny vaovao ary nisy ny antso hanatontosana hetsika tselatra ny zoma mba hiara-maka sary eo ivelan'ny D&G ho fanoherana ny politikam-panavakavahana. Tao anatin'ny andro vitsy, nihoatra ny 17.722 ny olona nanendry ny bokotra hanohana ny hetsika ao amin'ny takelaka momba ny hetsika . Mampiseho ny zavamisy tamin'ny Alahady ny lahatsary YouTube etsy ambany, raha mitaky ny hanaovan'ny D&G fialantsiny ampahibemaso ny mpanao fihetsiketsehana:
Nihoatra ny valo ora no nijoroan'ireo tangoron'olona teo ivelan'ny tsenambarotra. Eto ambany ny sarin'i Bird's-eye  tamin'ny fihetsiketsehana:
Saripika Mr. Lee
Nahoana no tezitra ny mponina tao Hong Kong tamin'ity indray mitoraka ity? ﻿Manazava  ny toe-draharaha ao amin'ny takelaka Facebook-ny ny Profesora Wan Chin, olomangan'ny mpitaky fizakantenan'ny tanàna:
Ny hetsika dia ho fanoherana ny fanavakavahana ataon'ny D&G amin'ny mponina ao Hong Kong sy ho fiarovana ny voninahitry ny vahoakan'i Hong Kong. Tezitra loatra amin'ny vehivavy bevohoka, mpizahantany ary mpanao trafika avy any amin'ny Taniben'i Shina ny olona. Manimba ny rafi-piarahamonina ao Hong Kong izy ireny. Izay no tena fahatsapan'ny mponina ao Hong Kong. Omaly raha nody an-trano tany Yuen Long aho dia nijery fahitalavitra ny vadiko ary nieritreritra hoe fihetsiketsehana hafa toy ny mahazatra io. Taty aoriana fantany fa ny Shinoa amin'ny Tanibe ihany no mahazo maka sary eo amin'ny D&G sy ny Harbour Plaza ary norarana ny mponina ao an-toerana tsy hanao izany, niaka-pofona ny anao vavy ka navoitrany fa efa hatramin'ny nanorenana ny tranon'izy ireny ny mponin'i Hong Kong no mpanjifa taminy, nefa ankehitriny dia ny mpizahantanin'ny Tanibe ihany no ifantohan'izy ireo ka mahatafintohina ny mponina ao an-toerana izany. Mora entim-po tokoa izy ka tsy mitsahatra ny manompa azy ireo. Izany no tena fahatsapana. Omaly aho dia nahita ny zokiolona nanao fihetsiketsehana ihany koa.
Nandray anjara tao amin'ny fihetsiketsehana ny olona iray nitafy tahaka an'i Iron Man  ary nanazava tamin'ny fahitalavitra tao an-toerana fa tonga hiady ho amin'ny rariny izy:
Saripika Be-linda Kwan, Facebook
Chan King Fai, mpanentana ao amin'ny radio, manazava ny mahadiso ny D&G :
Inona no mahadiso ny D&G?
1. Tsy manana ny fahatsapana iraisana (Fa ahoana no ahafahan'ny mpiambina an-dry zareo manelingelina amin'izao ataon'ny olona eny an-dalambe?);
2. Ny vola no voalohan-daharana (Nahoana no ny mpanankarena avy any amin'ny Tanibe Shinoa ihany no mahazo maka sary ivelan'ny tranombarotra?)
3. Mamadika ny olona ao an-toerana sy ny tenany ihany izy (Mirehareha loatra ny orinasa. Manana ny fahandraharahanao ianao satria niorina teto Hong Kong, mibodo ny afovoan-tanàna. Rehefa tsy manaja ny fomba fiainan'ny mponina eto an-toerana ianao dia mamadika ny fototra niorenanao.)
Yvonne Leung mino  fa ankoatra ny fanoherana ny fanavakavahana, ny tanjona farany dia ny hitaky ny arabe:
Ny mampîady hevitra eto dia ny sehatra ho an'ny sarambambe bodoin'ny orinasa sy ny fitantanana tafahoatra ny tanàna. Saingy ankehitriny dia lasa adika tafahoatra ho fanavakavahana sy adim-poko ilay izy. HIvaha ve ny olana raha mampihatra lalàna mitovy ho an'ny mpizahantany avy any Shina Tanibe ny tsenambarotra, mandrara azy ireo tsy hahazo haka sary ihany koa?
Runaway Szeto miezaka ny manangana adihevitra ao amin'ny Golden Forum  amin'ny valeran'ny tanàna:
Tsy misy dikany ity raharaha D&G ity.
Inona no eritreretinao raha maro marika lafovidy ny tanàna? Ary inona no tena itiavan'ny mponina eto Hong Kong ireny marika ireny? Nahoana na dia ny marika lafovidy eo ho eo ihany aza no mbola mahazo tombombarotra be ary anatin'ny lisitry ny tsenambola? Tia marika lafovidy ny mponin'i Hong Kong, mpihatsaravelatsihy isika. Ao anatintsika lalina ao dia manavakavaka ny saranga ambany sy ny mpitrongy vao homana isika. Tia mamaritra ny hafa amin'ny marika entiny isika ary tia miteny amin'ny hafa ny “saranga” misy antsika amin'ny alalan'ny marika lafovidy.
Ankehitriny miteny amin'ny mponin'i Hong Kong ny D&G: Tsy maintsy mandoa ho an'ny “saranga” misy anao ianao, ny “saranga” olona sasany ihany no arahabaintsika. Ary tsy ao anatin'izany “saranga” izany intsony ny mponin'i Hong Kong.
Ny fihetsiky ny D&G dia ny fihetsitsika. Mazava loatra, isika indray no avakavahana ho tahaka ny saranga iray ary tohina amin'izany isika. Ankehitriny isika vao manandratra ny fanevan'ny “fitoviana ho an'ny rehetra”.
Mieritreritra ve ianareo fa very vola ry zareo amin'ny hetsika tselatra ataonareo? Aza manondrana, manampy ny D&G indrindra ianareo amin'ny fananganany ny sarangan'ny marikany?
Raha efa nitsidika ny Tanibe ny mponin'i Hong Kong dia hahita fa misy toerana any ny Hong Kongey ihany no mahazo miditra ao fa ny avy ao amin'ny Tanibe kosa voarara tsy hankao, matoky aho fa ampoky ny hafaliana ny fon'ny Hong Kongey amin'izany. Ary raha manohitra izany ny mponin'ny Tanibe dia hitokelaka ianao, sady hiteny fa ratsy taiza sy mahantra ianao.
Noho ny karma-nao ihany no anesoana anao androany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/10/27299/
 Dolce & Gabbana's: http://en.wikipedia.org/wiki/Dolce_%26_Gabbana
 ny mpizahantany Shinoa avy any amin'ny Tanibe ihany no afa-manao izany: http://badcanto.wordpress.com/2012/01/09/the-truth-behind-hundreds-protest-at-dg-photo-ban-in-hong-kong
 17.722 ny olona nanendry ny bokotra hanohana ny hetsika ao amin'ny takelaka momba ny hetsika: http://www.facebook.com/pages/DG-%E9%96%80%E5%8F%A3%E8%90%AC%E4%BA%BA%E5%BD%B1%E7%9B%B8%E6%B4%BB%E5%8B%95/163804903726276
 sarin'i Bird's-eye: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150502620537420&set=a.141450552419.114417.128982007419&type=1
 nitafy tahaka an'i Iron Man: http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/391051_10150483086068004_691333003_8999644_375276757_n.jpg
 mahadiso ny D&G: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150589753783408&set=a.10150390825968408.412895.752343407&type=1
 manangana adihevitra ao amin'ny Golden Forum: http://forum5.hkgolden.com/view.aspx?type=CA&message=3481097